Nnukwu data, teknụzụ bụ isi na ecommerce | ECommerce ozi ọma
Nnukwu data, teknụzụ bụ isi na ecommerce
E-azụmahịa bụ otú ewu ewu na ọ kpaliri mmepe nke teknụzụ ọhụrụ dịka BIG DATA na-eme ka nhazi nke ihe omuma buru ibu.
Ihe ndị mere ndị ahịa ji aga ahịa zụta online Ha dị nnọọ mfe, 91% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-eche na mmefu nnyefe nke ọma na enweghị ihe ijuanya bụ isi ihe na-aga nke ọma n'ịzụ ihe n'ịntanetị.
N'akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego, anyị nwere usoro nloghachi na n'ọtụtụ peeji dị mgbagwoju anya ma na-agụnye usoro dị ogologo ma na-agwụ ike, nke na-adịghị ka azụmahịa azụmahịa ị nwere ike ịlaghachi ozugbo.
El Ngalaba ECommerce ma ọ bụ azụmahịa kọmputa na-aga n'ihu mgbe nile. Nchịkọta nke ahịa ụwa na-aga n'ihu na oke ọsọ na mpaghara azụmaahịa niile ịrị elu ngwa ngwa na ọnụ ọgụgụ ahịa na e-commerce ma e jiri ya tụnyere azụmahịa pụrụ iche.
Oge lagging nke ụlọ ọrụ ụfọdụ bụ ama, onye ọ bụla enweghị nke ya nchịkọta weebụ, na-ahapụ ọtụtụ puku ahịa kwa ụbọchị, ebe ọ bụ na ịntanetị nweta ihe maka ọrịre si n'ebe ọ bụla n'ụwa bụ eziokwu.
1 Kedu ihe na-eme ugbu a na e-Azụmaahịa?
2 Ya mere, gịnị ka anyị maara banyere ndị na-azụ ahịa?
2.1 Na e nwere ụdị ntanetị atọ dị iche iche na mba anyị:
3 Kedu onye zụrụ ọzọ?
4 Kedu ihe bụ Nnukwu data?
5 Ogidi 5 nke Nnukwu data
5.1 Mgbe ị na-ekwu maka echiche dị iche iche, ọ na-ezo aka n'ụdị data nke usoro ahụ na-enweta, ndị a bụ 3:
Kedu ihe na-eme ugbu a na e-Azụmaahịa?
ECommerce na-anọchite 11% nke nzụta zuru ezu na Spain mere, ejiji na-aga n'ihu na-abụ ngalaba na-edebanye aha ndị kasị ego eruba na-anọchi anya ndị 48% nke ịzụrụ ihe n'ịntanetị.
El Ọganihu ECommerce bụ unstoppable otu ihe a, agbaji ya ahịa ndia kwa afọ na ụbọchị dị ka Black Friday, Cyber ​​Monday, Christmaszụ ahịa Christmas na ahịa ndị a tụrụ anya na Jenụwarị na February. O doro anya na ụbọchị ndị a bụ oge dị elu maka azụmahịa kọmputa na ihe ịma aka gbagwojuru anya maka ngalaba mbupu na lọjistik na mba anyị.
La Omume ECommerce, nwere ike hụrụ na mbipụta nke abụọ nke 'eShopper Barometer', Nyocha zuru ezu nke DPDgroup mere na nzube nke ịmara ihe ndị a chọrọ, njirimara na isi ihe mkpali nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị. Nsonaazụ akụkọ a na-enye anyị panorama sara mbara banyere usoro ịzụ ahịa ugbu a na azụmahịa e-commerce.
Ya mere, gịnị ka anyị maara banyere ndị na-azụ ahịa?
Nke ahụ dị atọ ụdị dị iche iche nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na mba anyị:
Nnukwu ndị na-azụ ahịa, nke nwere nkezi nke nchịkọta 5,3 natara kwa ọnwa na ihe ha zụtara na-anọchite anya 87% nke ihe niile ịzụrụ n'ịntanetị mere n'afọ.
Nkezi ndị na-azụ ahịa, ndị na-enweta ihe nhọta nke nchịkọta 2,7 kwa ọnwa ma na-anọchite 11% nke ngụkọta ahịa kwa afọ n'ịntanetị.
Ndị na-azụ obere, na ngwugwu 1,3 ma ọ bụ obere natara kwa ọnwa, ha na-anọchi anya 2% nke ngụkọta kwa afọ ejiri ECommerce.
Kedu onye zụrụ ọzọ?
N'iburu n'uche ihe ndị a kwuru na eziokwu ahụ bụ na ECommerce na-anọchite anya 11% nke nzụta niile emere na Spain, ejiji na-aga n'ihu ịbụ ngalaba na-edebanye aha ọrụ kachasị ma na-anọchite anya 48% nke ịzụrụ ihe n'ịntanetị na Spain.
Imirikiti ihe ịzụrụ na-ada na millennials, ebe ọ bụ na ihe karịrị 57% kwetara na ha na-azụ ụdị ngwaahịa a site na netwọkụ.
Ndị na-esonụ posts nke ogo ogo Ha na-ji site azụmahịa ndi na Nlụpụta mara mma na nkà na ụzụ na ngwaahịa na 38% na 36% karị, nke ngụkọta nke ịzụ ahịa n'ịntanetị na Spain. Nkwupụta ahụ gosipụtara ntoputa nke ịzụ ahịa n'ịntanetị maka nri na ihe ọveraụ freshụ ọhụrụ na ebe 10 kachasị elu, nke dị na Spain nọ na 18% nke ahịa zuru oke. Na mgbakwunye na nke a, 14% nke ndị Spain na-azụta ntanetị, kwenyere na ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ọnwa ha na-azụta nri n'ịntanetị.
Mara echiche nke ndị na-azụ ahịa ịntanetị bụ Isi ihe ga - eme nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye ECommercna. Anyị niile kwenyere na ịzụta dị mfe ma dịkwa mma ga-enwe mmetụta dị mma na nkwado nke azụmaahịa ndị ọzọ emere na sincentanetị ebe ọ bụ na onye ahịa nwere afọ ojuju ga-emeghachi ahụmịhe ahụ ma kwado ya na ndị enyi na ezinụlọ ha. Nke a gosipụtara site n'otu nnyocha a, nke gosipụtara na 85% nke ndị na-azụ ahịa na-eche na nzụta n'ịntanetị ha dị mfe yana 75% nke ngụkọta nwere afọ ojuju na ahụmịhe ahụ.
Kedu ihe bụ Nnukwu data?
Big Data nọ na mkpirisi, ijikwa na nyochaa ọtụtụ ozi ma ọ bụ data, nke a na-apụghị ịgwọta n'ụzọ nkịtị, site na sistemụ arụmọrụ nkịtị, ebe ọ bụ na ha gafere ike nke ngwanrọ nkịtị ha gafere oke oke ndị a nwere na usoro nhazi algorithmic.
Kwuru echiche gụnyere mmepe nke teknụzụ na ngalaba dị iche iche dị ka akụrụngwa, teknụzụ na ọrụ ndị e mepụtara n'ụzọ pụrụ iche iji dozie nhazi nke ọtụtụ data ahaziri, ahazi ma ọ bụ nke ahaziri ahazi nke ga-abụ ozi na netwọkụ mmekọrịta, faịlụ ọdịyo, onyonyo dijitalụ, ụdị data, ozi ịntanetị, akara ekwentị, ihe mmetụta, data nke nyocha. Datesbọchị ndị a ha nwere ike si na sensọ dị iche iche, kamera, igwe nyocha ahụike, ma ọ bụ onyonyo.
Ebumnobi bụ isi nke Nnukwu usoro data, dịka nke usoro a na-ahụkarị, bụ ịtụgharị data gbagwojuru anya na ozi enwere ike inweta na ihe a na-ahụ anya nke na-eme ka mkpebi dị na ezigbo oge.
Lọ ọrụ taa, ha ejirila Big Data iji ghọta profaịlụ, mkpa na njirimara nke ndị ahịa ha na isi mmadụ, gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha na-ere. Nke a agbanweela ụzọ e si nye ndị ahịa ihe dị mkpa ebe ọ bụ na ọ na-enye ohere ka usoro ahụ gbanwee ụzọ ụlọ ọrụ ahụ si agwa ndị ahịa ya okwu yana otu ha si eweta ọrụ dị mkpa.
Ijikọ echiche nke Big Data na nnukwu ọnụọgụ data abụghị ihe ọgbara ọhụrụ. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nnukwu ụlọ ọrụ amalitelarị ịchịkwa nnukwu ozi, ma a manyere ha iji ya mee ihe teknụzụ ndị ọzọ dị ka DataWarehouses na ngwa oru nyocha di ike nke g’enyere ha aka iwetu nnukwu akwukwo ndi a n’uzo, tutu odi ọhụrụ Hadoop software. Ntopute nke teknụzụ pụtara na oke ozi ejiri ngwa ndị a amụbaala nke ukwuu.
Ogidi 5 nke Big Data
'Vs' atọ nke nnukwu data bụ njirimara ndị bụ isi iji mata ya, ndị a bụ: Volumen, Ọdịiche y Ọsọ. Mana site na ahụmịhe nke ụlọ ọrụ ndị ọsụ ụzọ nwetara na ngalaba njikwa ihe ọmụma a buru ibu, agbasawanye nkọwa izizi, na-agbakwunye ya njirimara njirimara ọhụụ dịka Adighi ike y Uru data.
A na-akpọ ya Nnukwu data mgbe mpịakọta gafere ikike na njedebe nke ngwanrọ nkịtị, ọ bụrụ Windows, Mac ma ọ bụ Linux, ka hazie ya n'enweghị nsogbu.
Echiche olu na-agbanwe agbanwe oge niile n'ihi mmụba ngwa ngwa dị otú ahụ, nke na-enye ohere ịhazi ọtụtụ oke ozi. Na-akọwapụta okwu a ntakịrị, nnukwu ozi bụ ọtụtụ narị ma ọ bụ puku Terabytes ma ọ bụ Petabytes, na ọnụ ọgụgụ buru ibu karịa nke nkịtị ọtụtụ puku Gigabytes na a na-eji kọmputa arụ ọrụ. Echiche nke olu dịkwa oke agbanwe, ebe ọ bụ na ụbọchị ọ bụla anyị na-atụle ọnụọgụ data esichara obere.
Ozi na Warelọ dataware nwere ike hazie, a ahaziri ozi gafere a nnukwu ọnụ ọgụgụ nke nzacha n'ihi na ikenyeneke mbiet àgwà akara, na-enwe ike na-ekwe nkwa na ozi ọ Filiks nwere a na mbụ kpebisiri ike nkenke na izi ezi.
Mgbe anyị kwuru banyere Big Data anyị na-ekwu maka ya ozi nke nwere ike ịhazi ọkara ma ọ bụ enweghị ụdị nhazi ọ bụla. Nhazi nke ozi a na-akwadoghị chọrọ teknụzụ dị iche ma nye onye ọrụ ohere ịme mkpebi dabere na ozi na-ezighi ezi. Imirikiti algọridim ndị a metụtara Advanced fuzzy logic system Treatment na-erubeghị 100% mepụtara.
Ikwu okwu banyere iche, na-ezo aka na ụdị data nke usoro ahụ na-enweta, ndị a bụ 3:
N'ikpeazụ, echiche nke ọsọ doro anya na-ezo aka ọsọ na nke nnukwu data a na-anabata ha, hazie ha ma nye ha ka ha mee mkpebi. Ọ gaghị ekwe omume maka imirikiti nke sistemụ arụmọrụ iji nyochaa ọtụtụ ozi ngwa ngwa, mana ọ dị ezigbo mkpa itinye echiche nke nhazi oge data maka usoro nyocha aghụghọ ma ọ bụ mmelite ahaziri iche, nke a na-enye ndị ahịa taa, na-eburu n'uche ihe ndị na-amasị gị, na ihe ndị ọzọ na-ahọrọ ihe ndị ha ga-akpọsa nke nwere ike ịmasị gị.
Eziokwu, imecha bụ, ntụkwasị obi nke ozi edozi, wepụta data dị mma, meziwanye echiche ebumpụta ụwa nke ụfọdụ, dị ka oge, akụ na ụba na ndị ọzọ, nke ga - enyere aka ịme mkpebi ka mma.
N'ikpeazụ, a na-agbakwunye ya uru, mkpa ozi dị oke mkpa maka azụmaahịa ahụMara ihe data ị ga-enyocha, iji dozie usoro ahụ dum, na-eme mkpebi nke a dị mkpa iji mee ka ọ dị ngwa ma zie ezi. Nke ukwuu nke mere na ọ bụrịrị nke abụọ kachasị achọ ọpụrụiche na Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Nnukwu data, teknụzụ bụ isi na ecommerce
Kickstarter Spain, nhọrọ ego maka ọrụ gị
Atụmatụ iji bulie ọnụahịa na ecommerce gị